Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Ukuhamba ngenqwelomoya ngaphandle kweLifthansa
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Iindaba zeMpilo • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Iindaba zaseSingapore zokuPhula • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
I-Lufthansa kunye ne-Singapore Airlines ngokudibeneyo ziya kunika enye yeenqwelo moya eziHanjisiweyo zokuHanjiswa yonke imihla, nokuba zisuka eFrankfurt okanye eMunich, ukuqala nge-16 Septemba.
Iinqwelomoya mihla le nge-16 Septemba ngokusebenzisana ne-Singapore Airlines.
Ukungena ngokukhululekileyo eSingapore kuphela ukuba uhambo luqala eJamani.
Uxolelo lokuvalelwa lodwa lusebenza kwiinqwelomoya ezithile, ezaziwa njengeNdlela yokuHamba ngeNtsholongwane (VTL).
Ukungena eSingapore ukusuka eJamani kubahambi abagonywe ngokupheleleyo kuya kuphinda kwenzeke nge-8 Septemba. Ukuvalelwa kwangaphambili xa ufika eSingapore akusayi kuphinda kufuneke ukusukela ngoku. IJamani lilizwe lokuqala apho isixeko se-mega kwi-Southeast Asia sityikitye isivumelwano malunga noku.
Uxolelo lokuvalelwa lodwa lusebenza kwiinqwelomoya ezithile, ezaziwa njengeNdlela yokuHamba ngeNtsholongwane (VTL). ILufthansa kunye Singapore Airlines Ngokudibeneyo banikezela enye yeenqwelo moya ze-VTL yonke imihla, nokuba zisuka Frankfurt okanye eMunich, ukuqala nge-16 Septemba. Ukubhukisha sele kunokwenzeka. Abathengi baya kuba nakho ukubhalisela iinqwelomoya ze-VTL kwiwebhusayithi yaseburhulumenteni yaseSingapore ukuqala nge-1 Septemba.
U-Elise Becker, iNtloko yeNtengiso kwezentengiso Lufthansa eAsia-Pacific. “Kubaluleke kakhulu kunangaphambili ukuba amazwe asebenze kunye ukufumana izisombululo zokubuyisela uhambo lomoya nakwamanye amazwe. ILufthansa kunye neSingapore Airlines zinegalelo elibonakalayo kolu phuhliso. ”
Oko kwabhengezwa ngurhulumente waseSingapore, ibango leenqwelomoya phakathi kweJamani neSingapore liye laphindaphindeka kathathu.
Ezi khrayitheriya zilandelayo zilungele abahambi ngenqwelomoya yeVTL eya eSingapore:
Ugonyo olupheleleyo olwenziwa eJamani okanye eSingapore ngePfizer-BioNTech / Comirnaty, Moderna, okanye olunye ugonyo lwe-WHO EUL.
hlala eJamani kunye / okanye eSingapore ubuncinci iintsuku ezingama-21 zilandelelana ngaphambi kokuba uye eSingapore. Abahambi be-VTL akufuneki babe nobumi baseJamani.
Uvavanyo lwe-Covid-19 PCR ngesiphumo esibi esathathwa kwiiyure ezingama-48 ngaphambi kokumka kunye novavanyo lwesibini lwe-PCR xa ufika eSingapore. Kuze kube kufunyenwe isiphumo esibi salo mbhalo, abahambi kufuneka bahlale kwihotele okanye kwindawo yokuhlala eSingapore. Kuxhomekeke kubude bohambo, ubuninzi beemvavanyo ezongezelelweyo ze-PCR zinokufuneka eSingapore.
ukubhukisha ngenqwelomoya kwinqwelo yeVTL echongiweyo.